Nimbostratus | Saadaasha Shabakadda
Anagoo ku sii soconayna dib u eegista aan ku samaynayno jaangooyada daruuriga ah ee ay daabacday WMO, waxaan xusuusan nahay waqtigii ugu dambeeyay ee aan ka wada hadalnay Altostratus, maanta waxaan ka hadleynaa nooca saddexaad ee daruuraha dhexe, waxaan tixraaceynaa Nimbostratus ama Nimbostratus.
Waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin a Daboolka cirro cirro leh, inta badan mugdi ah, oo leh muuqaal xijaab leh roobab ama baraf da'ay wax ka yar ama ka yar oo joogto ah. Dhumucda daruurtu way weyn tahay oo way qarin kartaa Qorraxda gebi ahaanba. Waxay ka kooban yihiin dhibco biyo ah, dhibco roob lagu qaboojiyey, dhibco dhibic, kiristaalo, iyo baraf baraf ah.
Nimbostratus waxaa badanaa lagu sameeyaa iyadoo la fuulayo lakab aad u ballaaran oo ballaaran oo hawo diiran oo qoyan leh
ka sarreysa cufnaanta qabow, on jiilaal horumar leh oo dabacsan. Waa, oo ay weheliso Altostratus, xudunta ugu weyn ee
un foodda diiran. Waa daruur aad u adag in la kala sooco, maadaama ay u muuqato sidii indho shareer madow oo isku mid ah,
iyada oo aan la joojin oo la mashquulin cirka oo dhan, oo lagu qaso roobab. Sidoo kale, waxay ku shaqeysaa a
cabbir toosan oo ballaadhan, meelaha ugu dhaadheer ayay ku fidsan tahay inta u dhexeysa 1 - 5 km, degganaan ahaan, qayb ahaan,
dabaqa daruuraha hoostooda. Waxay badanaa bixiyaan roobab joogto ah ama daadad baraf ah, inta badan la xiriirta dhinacyada hore ee diiran.
Aad ayey u adag yihiin in la sawiro. Iftiin la'aanta, oo ay weheliso roobab ka soo dhaca gudihiisa, ayaa samada sameeya
u eg shiraac aad u weyn oo mugdi ah oo aan wax faahfaahin ah lahayn. Waxaa lagugula talinayaa inaad isku daydo inaad sawir ka qaaddo markii daruuro hoose oo jeexan ay hoos maraan, taasi waa, Stratus fractus. Waa muhiim inaan lagu qaldin iyaga iyo Altostratus, Nimbostratus nama ogolaanayaan inaan aragno Qorraxda si uun waxayna had iyo jeer soo saaraan roob dhexdhexaad ah. Mana aha in lagu qaldo Stratocumulus maadaama ay labiskoodu ka yaryahay.
Daruurahaasi malaha nooc nooc ama noocyo ah.
Macluumaad dheeraad ah - Altostratus
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Nimbostratus
daruuro qariib ah oo aad horeyba uga heshay
Jedi ku jawaab